Sida loo Delete App ka ah Samsung Phone ama Tablet
Uninstalling app ka qalab Samsung ah waa mid fudud oo toos ah. Marka laga xaaladda asalka u ah qalab aad ka, waxaad si fudud u uninstall karaa app kasta oo aad ka soo dejisan oo lagu rakibay ka Google Play Store ama meel kasta cid saddexaad.
Waxaad raaci kartaa fariimaha tallaabo-tallaabo hoos ku siiyey in ay ka saarto app ah ka Samsung telefoonka gacanta ama kiniin:
1. noqda ee aad taleefan Samsung / kiniin. Xusuusnow: Samsung Galaxy Note4 waxaa loo isticmaalaa in uninstall app ah mudaaharaad halkan.
2. Laga screen Home ku, tuubada Apps icon in la furo suuqa kala Apps.
3. Tubada icon Settings ee ka mid ah liiska soo bandhigay.
4. Laga soo Settings interface, hoos u rogto, hel, oo ka jaftaa Tababaraha Codsiga ka soo hoos bixiyey Codsiyada qaybta. Fiiro gaar ah: Iyada oo ku xidhan model ah ee telefoonka ee, aad u aragto in Apps, tababaraha Apps , ama Codsiyada halkii tababare Codsiga on qalab aad.
5. Marka uu ku Codsiga tababaraha uu furmo suuqa in fureysaa, liiska soo bandhigay ee Chine lagu rakibay, ka jaftaa ka mid ah in aad rabto in aad ka qaad qalab aad.
6.On ah APP ee suuqa kala ah app ee la doortay, tuubada uninstall button.
7. Marka baxdo, ee ah app uninstall box in booda, tuubada uninstall in aad bixiso ogolaashahaaga si app saaro ka Samsung phone / kiniin.
Ka kaxaynta oo dhamaystiran App ah
Inkasta oo qaabkan kor lagu soo uninstalls ee Chine rabin ka Samsung ama mid ka mid ah qalabka Android, waxa aanu si buuxda u saarto barnaamijka. Xitaa ka dib markii uninstalling app ah, waxaa jira raadad yar - qashin soo - barnaamijka in ay weli ka tagay ama lagu kaydiyo gudaha ee telefoonka, ama kaarka dibadda SD in qalab aad waxaa laga yaabaa.
Si buuxda u app ka saarto oo ay la socdaan ay qashin soo ka telefoonka, waa in aad ku tiirsan yihiin barnaamijka dhinac saddexaad ku ool ah sida MobileGo Wondershare.
Wondershare MobileGo kaa caawinaysaa in aad ka saarto barnaamijyo aan loo baahnayn adiga oo isticmaaleya isticmaale PC. Qaybta ugu fiican yahay, MobileGo ka saaraysaa Chine ay la socdaan oo dhan raad ah in ay ka baxaan ka dambeeya haddii kale. Ma aha oo kaliya taasi, Wondershre MobileGo sidoo kale kaa caawinaysaa in aad u maamuli lahayd qalab Samsung fudayd, guuraan barnaamijyadooda ka kaydinta gudaha telefoonka ee la xiriira warqadda SD dibadda, oo kuu ogolaanaya in aad dib ama soo celin telefoonka la hal mouse-click.
Waxa intaa dheer in, aad marna masixi karin telefoonka iyo ka hor inta iibinta off in qof aan la aqoon oo dhan wada baabbi'isaan bixisay fiidda oo war sir ah oo xasaasi ah aad ka.
Tallaabo-tallaabo tusmo uninstall app ka phone Samsung ama kiniin
Ka dib markii aad soo bixi oo lagu rakibay Wondershare MobileGo aad kombuutarka, waxaad raaci karaan tilmaamaha tallaabo-tallaabo hoos ku siiyo si buuxda u uninstall app la rabin ka qalab Samsung:
1. aad PC, double-riix Wondershare MobileGo ee toobiye icon ay u bilowdo barnaamijka.
2. in ay PC isticmaalaya cable xogta in geeyey weheliyaan waxaa la Connect telefoonka Samsung.
3. Sug inta Wondershare MobileGo ogaadaa aad telefoon oo ku rakibtay wadayaasha looga baahan yahay labada on PC iyo telefoonka gacanta. Fiiro gaar ah: kani waa geedi socod hal mar oo waxaa la sameeyaa hal mar oo keliya marka aad aad casriga Samsung xidhmaan PC ah markii ugu horeysay ka dib rakibidda MobileGo Wondershare.
4. aad Samsung telefoonka, marka baxdo, ee ah ogolow USB debugging box in booda, tubbada si uu u hubiyo ka Had iyo jeer u ogolaan computer tan iyo markaas ka jaftaa OK in ay oggolaadaan in aad telefoon in ay aaminaan computer waxa uu ku xidhan yahay. Fiiro gaar ah: Hubinta ah Had iyo jeer u ogolaan computer this checkbox hubisaa in aadan ku kaliftay oo fariin isku mid ah mar kasta oo aad telefoonka ku xidhmaan PC. Si kastaba ha ahaatee, arrimo amaan awgood, ma aha in aad hubiso checkbox haddii PC loo isticmaalo meelaha dadweynaha ama ma hantidaada gaarka ah iyo waa sugneeyn.
5. Marka wax walba ilaa iyo ordaya waa, on Wondershare MobileGo ee interface, ka Murayaad bidix, guji si loo xusho Apps category.
6. Laga bilaabo geed ballaariyeen, guji in ay doortaan User Apps .
7. Ka liiska barnaamijyadooda ku rakiban in ay leeg- tahay xarunta, hubi checkbox matalaya mid ka mid ah in aad rabto in aad ka saarto.
8. From sare ee interface ka, guji uninstall .
9. On the Su'aal sanduuqa xaqiijin, guji Haa in aad bixiso ogolaashahaaga si aynu Wondershare MobileGo uninstall app ka telefoonka Samsung.
10. Marka lagu sameeyey, aad xirto karaa MobileGo, barkinta aad telefoonka ka PC iyo bilaaban waxaa sida caadiga ah la isticmaalayo.
Inkastoo wax qashin soo tagay ku saabsan telefoonka marka aad uninstall app ka Dhibayn waxaa ma qalab iyo sida file Agoon ah ma uusan u oofiyo tallaabo kasta oo wax alla wixii, ururinta alaabta badan oo kuwan oo hoos u dhigi karaan qaab telefoonka ee mustaqbalka fog.
Tan iyo telefoonada Android ka fiiri storages gudaha iyo dibadda si joogto ah, warbaahinta kaydinta ku badan files aan la rabin oo agoon ah hoos u dhigi karaan habka iskaanka ah, kaas oo natiijada dheeraad ah hoos u xawaaraha navigation ee telefoonka.
Isticmaalka barnaamij smart sida Wondershare MobileGo hubisaa in aad telefoon weli had iyo jeer nadiif ah oo xor ka ah waxyaabaha aan la rabin, sidaas hayo kartiyeed dhawrsan xitaa ka dib markii ay ku rakibidda iyo uninstalling barnaamijyadooda dhowr jeer.
Best 4 Manager Android xawaaladaha: Sida loo sameeyo Android xawaaladaha si dhakhso ah
Ka Computer Bedelka Music inay Android wirelessly
Sidee si ay u gudbiyaan Apps in Android
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada, Photos, SMS, Music iyo Video laga soo Nokia in Android
> Resource > Android > Sida loo uninstall App ka Phone Samsung ama Tablet